Shiinaha Procaine / Procaine Base CAS 59-46-1 muunad bilaash ah oo si dhakhso ah u keenta warshad iyo soo saarayaasha | Guanlang
Saldhigga Procaine / Procaine Base CAS 59-46-1 muunad bilaash ah oo si dhakhso ah loo bixiyo
Magaca Kiimikada: Saldhigga Procaine
CAS Maya .: 59-46-1
Qaaciddada Molecular: C13H20N2O2
Miisaanka Molecular: 236.310
Muuqaalka: hydrochloride-keedu waa midab la’aan, irbad yar-yar oo u eg ama kristantar lobular ah, oo leh dhadhan yar oo qadhaadh iyo xanaaq aan fiicnayn oo carrabka saaran.
Saldhigga Procaine TDS
Muuqaal Hydrochloride-keeda waa midab aan lahayn, ur yar oo udgoon u eg ama kristantar lobular, leh dhadhan yar oo qadhaadh iyo dareen cidhiidhi ah oo ku dhaca carrabka.
Cufnaanta 1.1 ± 0.1 g / cm3
Caanaha molecular C13H20N2O2
Tayada saxda ah 236.152481
Xaaladaha kaydinta Tallaabooyin farsamo: Ku daawee meel hawo wanaagsan leh. Xidho qalab difaac oo habboon. Ka hortag faafitaanka boodhka. Si fiican u dhaq gacmaha ka dib taabashada iyo wejiga Fiiro gaar ah: Haddii siigo ama aerosol ay soo baxaan, isticmaal qiiqa maxalliga ah Digtoonida gacanta u qaad: Ka fogow taabashada maqaarka, indhaha iyo dharka.
Xaaladaha keydinta: Weelka si adag u xir. Ku kaydi meel qabow oo mugdi ah.
Ka fogow waxyaabaha aan is-qaadan karin sida oksidheeyeyaasha.
Xasiloonida Way xasilan tahay guud ahaan, si fudud biyaha ugu milma, wax yar ku milma ethanol, wax yar ku milma chloroform. Xalka aqueous-ka waa mid aan xasillooneyn, gaar ahaan marka ay soo ifbaxdo iftiinka, walxaha acid-base-ka ah way fududahay inay xumaadaan.
Saldhigga Procaine Isticmaalka
Procaine waxay ku dhaqaaqi kartaa waxqabadka suuxinta maxalliga ah iyada oo loo marayo bartilmaameedyo badan.
Suuxdinta maxalliga ah. Wax soo saarkani wuxuu xasilin karaa xuubka unugyada wuxuuna yareyn karaa u nuglaanshadiisa ion, si marka dareemayaasha dareemayaasha ay gaaraan, sodium iyo potassium ions ma geli karaan ugana bixi karaan xuubka unugyada si ay u soo saaraan awood furfuris iyo waxqabad, sidaasna ku soo saaraya suuxdinta maxalliga ah Badeecadani waxay leedahay awood dhex-dhexaad ah oo xuubka dheecaanka leh mana ku habboon tahay suuxdinta dusha sare, laakiin waxay leedahay sun hooseeya iyo saameyn lagu kalsoonaan karo. Waxaa loo isticmaalaa suuxdinta infakshanka. Suuxdinta xannibaadda iyo suuxdinta epidural'ka ayaa sidoo kale la isticmaali karaa.
Saldhigga Procaine Pxanuujin iyo Maraakiib
Xirxirida: 20kg / durbaan, bac aluminium aluminium ah ama kartoon
25kg / durbaan, bac aluminium ama kartoon
Amarka muunada Procaine Base
Loo heli karo amarka muunada.
Tirada waxay ku xiran tahay baahida macaamiisha.
Hore: Bixinta badbaadada Phenacetin budada kareemka, finacetin budada dhalaalaysa CAS 62-44-2 waxay leeyihiin sharaabaad fara badan
Xiga: Tayo sare leh Valerophenone CAS 1009-14-9 oo ka socota warshada Shiinaha ee Valerophenone
Budada Procaine Hcl